Bhaibheri mune rimwe gore - Shona Bible 2009 [Bhaibheri Dzvene]
1. Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati,
2. "Nditsaurirei madangwe ose; zvose zvinotanga kuzarura chizvaro pakati pavana vaIsiraeri, kana kuvanhu kana kuzvipfuwo, ndezvangu."
3. Zvino Mozisi akati kuvanhu, "Rangarirai zuva iri ramakabudiswa naro paIjipiti, paimba youranda, nokuti Jehovha akakubudisai pano noruoko rune simba; chingwa chakaviriswa ngachirege kudyiwa nemi.
4. Nhasi munobuda nomwedzi weAbhibhi.
5. Zvino kana Jehovha akusvitsa kunyika yavaKenani, neyavaHeti, neyavaAmori, neyavaHivhi, neyavaJebhusi, yaakambopikira madzibaba ako, kuti achakupa iyo, nyika inoyerera mukaka nouchi, unofanira kundoita basa iri nomwedzi uno.
6. Unofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe; pazuva rechinomwe Jehovha ngaaitirwe mutambo.
7. Chingwa chisina kuviriswa ngachidyiwe mazuva manomwe; chingwa chakaviriswa ngachirege kuonekwa kwauri, kunyange mbiriso ngairege kuonekwa kwauri panyika yako yose.
8. Udza mwanakomana wako nomusi iwoyo, uti, `Ndizvo zvinoratidza zvandakaitirwa naJehovha musi wandakabuda Ijipiti.'
9. Chinofanira kuva chiratidzo kwauri paruoko rwako, nechirangaridzo pakati pameso ako, kuti murayiro waJehovha uve mumuromo mako; nokuti Jehovha akakubudisa paIjipiti noruoko rune simba.
10. Naizvozvo unofanira kuchengeta murayiro uyu nenguva yawo gore rimwe nerimwe.
11. "Zvino kana Jehovha akusvitsa kunyika yavaKenani, sezvaakakupikira iwe namadzibaba ako, akakupa iyoyo,
12. unofanira kusanangurira Jehovha zvose zvinotanga kuzarura chizvaro, nezvokutanga zvose pazvipfuwo zvaunazvo, zvirume ndezvaJehovha.
13. Mwana wokutanga wembongoro unofanira kuudzikunura negwayana, kana usingadi kuudzikunura, unofanira kuvhuna mutsipa wawo; madangwe ose avanhu pakati pavanakomana vako unofanira kuadzikunura.
14. Zvino kana mwanakomana wako achizokubvunza panguva inouya, akati, `Chinyiko ichi?' Uti kwaari, `Jehovha akatibudisa noruoko rune simba paIjipiti paimba youranda;
15. nokuti panguva iyoyo Farao yaakaramba kutitendera kuenda, Jehovha akauraya matangwe ose enyika yeIjipiti, matangwe ose avanhu navana vemhongora dzezvipfuwo;' naizvozvo ndinobayira Jehovha zvose zvinotanga kuzarura chizvaro, kana zviri zvirume; asi matangwe ose avanakomana vangu ndiNowadzikunura.
16. Ichi chichava chiratidzo paruoko rwako, norundanyara pameso pako; nokuti Jehovha akatibudisa noruoko rune simba."
17. Zvino Farao akati aregedza vanhu kuti vaende, Mwari haana kuvafambisa nenzira yapanyika yavaFirisitia, kunyange yaiva pedo, nokuti Mwari akati, "Zvimwe vanhu vangazvidemba, kana vachiona kurwa, vakadzokera Ijipiti,"
18. asi Mwari akapotesa vanhu nokure, nenzira yokurenje rapaGungwa Dzvuku; vana valsiraeri vakabuda panyika yeIjipiti vakashonga nhumbi dzokurwa.
19. Mozisi akatora mapfupa aJosefa, akaenda nawo; nokuti akanga apikisa vana vaIsiraeri, achiti, "Zvirokwazvo Mwari achakushanyirai, muchabva pano, mugoendawo namapfupa angu."
20. Zvino vakatanga rwendo rwavo vakabva Sukoti, vakandovaka misasa yavo paEtamu, pamucheto werenje.
21. Jehovha akavatungamirira masikati neshongwe yegore rokuvaperekedza panzira, usiku neshongwe yomoto yokuvavhenekera, kuti vafambe masikati nousiku.
22. Shongwe yegore yakanga isingabvi pamberi pavanhu masikati, kana shongwe yomoto usiku.
2. "Udza vana vaIsiraeri, kuti vadzoke, vavake misasa yavo pamberi paPihahiroti, pakati peMigodhori negungwa, pamberi peBhaarizefoni; muvake misasa yenyu pagungwa pakatarisana napo.
3. Zvino Farao achati pamusoro pavana vaIsiraeri, `Varasa nzira panyika, renje ravadzivirira.'
4. Ndichaomesa moyo waFarao kuti avateverere; ini ndichakudzwa pamusoro paFarao napahondo yake yose; vaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha." Vakaita saizvozvo.
5. Zvino mambo weIjipiti akaudzwa kuti vanhu vatiza; moyo waFarao nowavaranda vake ukashandukira vanhu, vakati, "Taita seiko zvatatendera vaIsiraeri vakanga vachitibatira kuti vaende?"
6. Zvino akagadzira ngoro yake, akaenda navanhu vake;
7. akatora ngoro dzakatsaurwa dzina mazana matanhatu, nengoro dzose dzeIjipiti, dzina vatariri vadzo dzose.
8. Jehovha akaomesa moyo waFarao, mambo weljipiti, akateverera vana vaIsiraeri, nokuti vana vaIsiraeri vakanga vabuda noruoko rune simba.
9. VaIjipiti vakavateverera namabhiza ose nengoro dzaFarao, navatasvi vake vamabhiza, nehondo yake, vakavabata vachiri pamisasa pagungwa, paPihahiroti pamberi peBhaarizefoni.
10. Zvino Farao akati asvika pedo, vana valsiraeri vakasimudza meso avo, vakaona vaIjipiti vachivateverera, vakatya kwazvo; vana vaIsiraeri vakachema kuna Jehovha.
11. Vakati kuna Mozisi, "Makanga muchiti hamuna mahwiro paIjipiti, mukatibvisako kuti tifire murenje here? Makatiitireiko zvamatibudisa paIjipiti?
12. Ko harizi shoko iro ratakakuudzai paIjipiti here, tichiti, `Tiregei, tibatire hedu vaIjipiti? Nokuti zviri nani kuti tibatire vaIjipiti, pakuti tifire murenje.' "
13. Zvino Mozisi akati kuvanhu, "Musatya henyu, mirai, mugoona sununguro yaJehovha, yaachakuitirai nhasi, nokuti vaIjipiti vamaona nhasi, hamungazovaonizve nokusingaperi.
14. Jehovha achakurwirai, imwi munofanira kunyarara henyu."
15. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Unodanidzireiko kwandiri? Udza vana valsiraeri kuti vapfuurire mberi.
16. Iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati, kuti vana vaIsiraeri vafambe pakaoma mukati megungwa.
17. Tarira, ndichaomesa moyo yavaIjipiti, kuti vapindewo vachivateverera, ini ndizokudzwa pamusoro paFarao napamusoro pehondo yake yose, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pavatasvi vake vamabhiza.
18. Ipapo vaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha, kana ndakudzwa pamusoro paFarao, napamusoro pengoro dzake, napamusoro pavatasvi vake vamabhiza."
19. Zvino mutumwa waMwari, akanga akatungamirira hondo yavaIsiraeri, akabvapo, akaenda shure kwavo; shongwe yegore ikabva mberi kwavo, ikandomira shure kwavo.
20. Ikapinda pakati pemisasa yavaIjipiti nemisasa yavaIsiraeri; gore nerima, zvikavapo asi rakavhenekera usiku; havana kuswederana usiku hwose.
21. Zvino Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, Jehovha akadzinga gungwa nemhepo ine simba, yakabva mabvazuva usiku hwose, akashandura gungwa, rikaita ivhu rakaoma, mvura ikatsemuka.
22. Zvino vana valsiraeri vakapinda nomukati megungwa pakaoma, mvura ikavaitira madziro kurudyi rwavo nokuruboshwe rwavo.
23. vakavateverera, vakapinda shure kwavo mukati megungwa namabhiza aFarao ose, nengoro dzake navatasvi vake vamabhiza.
24. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yavaIjipiti, ari mushongwe yomoto neyegore, akavhundusa hondo yavaIjipiti.
25. Akanyudza makumbo engoro dzavo, dzikatambudzika pakufamba; vaIjipiti vakazoti, "Ngatitize pamberi pavaIsiraeri, nokuti Jehovha anovarwira ivo, asi anorwa navaIjipiti."
26. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Tambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa, kuti mvura idzokere pamusoro pavaIjipiti, napamusoro pengoro dzavo, napamusoro pavatasvi vavo vamabhiza."
27. Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, gungwa rikadzokera kwakare koedza; vaIjipiti vakatizira mukati maro; Jehovha akaparadza vaIjipiti mukati megungwa;
28. mvura ikadzoka, ikafukidza ngoro, navatasvi vamabhiza, nehondo yose yaFarao yakanga yapinda mugungwa ichivateverera; hakuna kusara kunyange nomumwe wavo.
29. Asi vana vaIsiraeri vakafamba pakaoma mukati megungwa; mvura ikavaitira madziro kurudyi rwavo nokuruboshwe rwavo.
30. Jehovha akarwira vaIsiraeri saizvozvo nomusi iwoyo pamaoko avaIjipiti; vaIsiraeri vakaona vaIjipiti vakanga vafa pamhenderekedzo dzegungwa.
31. Ipapo vana vaIsiraeri vakaona basa guru rakanga raitirwa vaIjipiti naJehovha, vanhu vakatya Jehovha, vakatenda Jehovha naMozisi muranda wake.
13. Jehovha akatinhirawo kudenga-denga, Wokumusorosoro akataura nenzwi rake; Chimvuramabwe namazimbe omoto.
14. Akatuma miseve yake, akavaparadza; Zvirokwazvo, nemheni zhinji, akavavhundusa.
15. Ipapo migero yemvura zhinji yakaonekwa, Uye nheyo dzenyika dzakafukurwa, Nokutuka kwenyu, Jehovha, Nokufema komweya wemhino dzenyu.
16. Wakatambanudza ruoko rwake ari kumusoro, akanditora, Akandinyukura pamvura zhinji.
17. Akandirwira pamuvengi wangu ane simba, Nokuna vanondivenga, nokuti vakanga vondikurira.
18. Vakandivinga nezuva renjodzi yangu, Asi Jehovha akanga ari mutsigiri wangu.
19. Akandibudisira kunzvimbo yakafarikana, Akandirwira, nokuti akanga achindifarira.
6. Enda kumujuru, iwe simbe; Cherekedza nzira dzawo ugova wakachenjera!
7. Kunyange iwo usina mutongi, Kana mutariri kana mubati,
8. Unogadzira zvokudya zvawo mumunakamwe, Nokuunganidza zvokudya zvawo mukukohwa.
9. Iwe simbe, uchavata pasi kusvikira rinhiko? Uchamuka rinhiko pahope dzako?
10. Kumbovata zvishomanene, kumbotsumwaira zvishomanene, Kumbofungatira maoko zvishomanene, ndizorore;
11. Saizvozvo urombo hwako huchasvika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu wakashonga nhumbi dzokurwa.
1. Vakati vachiswedera Jerusarema, vasvika Betefage, pagomo reMiorivhi, ipapo Jesu akatuma vadzidzi vaviri,
2. akati kwavari: Endai kumusha wakatarisana nemwi, pakarepo muchawana mbongoro yakasungirwa, inedhongwana; sunungurai, muvuyise kwandiri.
3. Kana aninani achitaura chinhu kwamuri, muchati: Ishe unozvida; pakarepo uchazvitumira,
4. Izvozvo zvakaitwa, kuti zvizadziswe zvakataurwa nomuporofita. achiti:
5. Vudzai mwanasikana weZiyoni: Tarira Mambo wako unovuya kwauri; ari munyoro, akatasva mbongoro, nedhongwana mwana wembongoro.
6. Vadzidzi vakaenda, vakaita sezvavakarairwa naJesu,
7. vakavuya nembongoro nedhongwana, vakaisa nguvo dzavo pamusoro pazvo; vaka\_add mu\_add*gadza pamusoro pazvo.
8. Chaunga chikuru chikawarira nguvo dzacho munzira; vamwe vakatema matavi pamiti vakawarira munzira.
9. chaunga chakanga chakamutungamirira nechakanga chichitevera chikadanidzira, chichiti: Hosana* kuMwanakomana waDavhidhi! Ngaarumbidzwe iye unovuya muzita raShe! Hosana* kumusoro-soro!
10. Wakati apinda Jerusarema, guta rose rikazungunuswa, vakati: Uyu ndianiko?
11. chaunga chikati: Uyu ndiJesu muporofita weNazareta reGariri.
12. Zvino Jesu wakapinda mutembere yaMwari, akabudisa vose vaitengesa navaitenga mutembere, akakwidibira matafura avaitsinhanha mari, nezvigaro zvavaitengesa njiva.
13. Akati kwavari: Kwakanyorwa \_add kuchinzi\_add*: Imba yangu ichanzi imba yomunyengetero, asi imwi munoiita bako ramakororo.
14. Zvino mapofu navaikamhina vakavuya kwaari mutembere; akavaporesa.
15. Asi vaprista vakuru navanyori vakati vachivona zvinhu zvinoshamisa zvaakanga achiita, navana vachidanidzira mutembere vachiti: Hosana* kuMwanakomana waDhavhidhi! Vakatsamwa zvikuru,
16. vakati kwaari: Unonzwa zvavanotaura ivava here? Jesu akati kwavari: Hongu, imwi hamuna kutongorava here, kuti: Mumuromo mavacheche navanomwa makazadza kukudza?
17. Akavasiya, akabuda muguta, akaenda Bhetaniya, ndokuvatapo.
18. Mangwanani wakati achidzokera kuguta, akanzwa nzara.
19. Zvino, wakati achivona muvonde panzira, akaenda kwauri, akasawana chinhu kwauri, asi mashizha chete; akati kwawuri: Ngakurege kuva nezvibereko kwauri nokusingaperi. Muvonde ukaswava pakarepo.
20. Vadzidzi vakati vachivona, vakashamiswa, vakati: Muvonde wasvava pakarepo seiko?
21. Jesu akapindura akati kwavari: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Dai maiva nokutenda, musingakahadziki, hamungaiti izvi kumuvonde chete, asi kana mukati kugomo iri: Simudzwa, ukandirwe mugungwa, zvichaitwa.
22. Nezvose zvamunokumbira muchinyengetera, kana muchitenda, muchazvipiwa.